ထရမ့်တယောက် အာဏာရှင် ဆန်သွားပြီလား? (သူ့အကြောင်း စာအုပ်ရေးသူကို တရားစွဲ) - Zet Star
ထရမ့်တယောက် အာဏာရှင် ဆန်သွားပြီလား? (သူ့အကြောင်း စာအုပ်ရေးသူကို တရားစွဲ)
September 18, 2020 September 18, 2020 ZCC News	0 Comments
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဟောင်း ဂျွန်ဘော်လ်တန် ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လက သူထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ ကန့်သတ်ထားတဲ့နိုင်ငံ့အတွင်းရေးသတင်းတွေကို ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ စစ်ဆေးခံနေရပါတယ်.. အမေရိကန် တရားရေးဌာနဟာ “The Room Where It Happened” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခြင်းရပ်ဆိုင်းဖို့လုပ်ခဲ့တာ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခါ ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် စတင်လုပ်ဆောင်လာပါတယ်…
စာရေးသူ ဂျွန်ဘော်လ်တန် ကတော့ စွပ်စွဲချက်အားလုံးကို ငြင်းဆိုထားတယ်.. စာအုပ်ထဲမှာ သူက သမ္မတထရမ့်ကို ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပညာမဲ့တဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ သမ္မတ တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဖော်ရေးသားထားပါတယ်.. ဂျွန်ဘော်လ်တန် ဟာ သမ္မတထရမ့်ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေးအဖြစ် ၂၀၁၈/၁၉ မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်.. သူက သမ္မတရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ရပ်တွေအားလုံးဟာ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီး သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရဖို့ ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဦးတည် လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့သူပါ…
စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေတဲ့အချိန်တုန်းက သမ္မတ ထရမ့်ဟာ သူ့ရဲ့အကြံပေးကို အရည်အချင်းမပြည့်ဝတဲ့သူ လူလိမ်တစ်ယောက်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး တရားစွဲခံရစေဖို့ အထိတောင် ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်.. အမှုမှာ ဘော်လ်တန်က သူ့စာမူကို အမျိုးသားလုံခြုံရေးကစိစစ်ပြီးပြီ လို့အခိုင်အမာပြောနေခဲ့ပေမယ့် အများကပြောနေကြတာကတော့ စိစစ်သုံးသပ်ရေးလုပ်နေတာဟာ မပြီးသေးဘူး မပြီးခင်မှာ ပြီးသလိုလိုနဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာ တရားရုံးက ပိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်…
တရားရေးဌာနက စုစည်းဖွဲ့ပေးထားတဲ့ ခုံသမာဓိဂျူရီအဖွဲ့ကတော့ စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ဘော်လ်တန်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Javelin Agency တို့ကို ဆင့်ခေါ်စာထုတ်ထားပါတယ်.. ထွက်ဆိုချက်ထဲမှာ ဘော်လ်တန်ရဲ့ ရှေ့နေ ဖြစ်တဲ့ Charles J. Cooper ကပြောထားပါတယ် ” ဘော်လ်တန်အနေနဲ့ မလျှော်မကန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ် ဒီစာအုပ် ထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရာရောက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲပြောဆိုချက်အားလုံးကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပယ်ချပါတယ် တရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအားလုံးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ် ” လို့ပါရှိကြောင်း ပြောသွားပါတယ်…
ဘော်လ်တန်ရဲ့စွပ်စွဲရေးသားချက်အတော်များများဟာ ပုဂ္ဂလိက သီးသန့်နှစ်ကိုယ်ကြား ပြောဆိုမှုတွေအပေါ် အခြေခံထားတာဖြစ်နေတော့ မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ရေးသားထားတာတွေထဲက ပြောပြရရင် သမ္မတထရမ့်ဟာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက် တရုပ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဆီက အကူအညီယူခဲ့တယ် ” ရွေးကောက်ပွဲမှာ လယ်သမားတွေအရေးဟာအရေးကြီးတယ် ပဲတွေနဲ့ ဂျုံတွေများများဝယ်ပေးပါ.. ” တရုပ်ပြည်ရှင်းကျန်းပြည်နယ်မှာ တရုပ်အစိုးရက ဆောက်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သင်ကြားရေးစခန်းတွေ တည်ဆောက်ရေးဟာ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်…
ထရမ့်ဟာ ရာဇဝတ်မှုစစ်ဆေးရေးတွေမှာဝင်ပါဖို့ ကြားဝင်ဖို့ဆန္ဒအမြဲရှိတယ် သူကြိုက်တဲ့အာဏာရှိသူတွေဖက်က ဝင်ပြီးဘက်လိုက်တတ်တယ်.. ဥပမာ တူရကီ သမ္မတ အာဒိုဂန်တူရကီကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာမျိုးကို အကွယ်အကာပေးခဲ့တယ်.. ဗင်နီဇွဲလားကို ထိုးဖောက်ကျူးကျော်တာကို အမေရိကန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်က ဒါဟာ အေးဆေးပဲ တောင်အမေရိကဟာ အမေရိကန်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲလို့ ပြောခဲ့တယ်.. ယူကေနိုင်ငံဟာ နျူကလီးယားပါဝါရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကို ထရမ့်ဟာမသိရှာဘူး…
ပြီးတော့ ဖင်လန်ဟာ ရုရှရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေလားဆိုပြီး စာအုပ်မထုတ်ဝေခင်ကာလက အကြံပေးလုပ်သူကိုမေးခဲ့တယ်.. သမ္မတထရမ့်က ဒီစာအုပ်ဟာ အလိမ်အညာနဲ့အတုအယောင်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့စာအုပ်ပဲ လို့ပြောခဲ့တယ်.. ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်တွေနဲ့သူကျွန်တော့်ကို ထိုးနှက်ခဲ့တာတွေဟာ တကယ်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး စိတ်ကူးယဥ်တွေပါ သူ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်လို့ လက်စားချေနေတာပါ လို့ ထရမ့်က တွစ်တာမှာ ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်…
အခုတော့ စာရေးသူဟာ ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ အမှုကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်…
← ဖောင်ကြီးဆေးရုံက ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ လူနာအချို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓာတ်ကျနေ
လူတသန်းမှာ တယောက်ပဲ မွေးလေ့ရှိတဲ့ ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့ ကလေး (နေပြည်တော် နောက်ဆက်တွဲသတင်း) →